Ahoana no Hataoko mba Tsy Hisy Hanadala Ahy? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Féroïen Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kyangonde Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mooré Myama Norvezianina Nzema Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tiorka Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ahoana no Hataoko mba Tsy Hisy Hanadala Ahy?
Diniho ireto torohevitra azo ampiharina avy ao amin’ny Baiboly ireto:
Aoka ianao ho matotra. Miezaha ho sariaka ary hajao ny mpiara-miasa aminao. Aza atao anefa izay hahatonga azy hieritreritra hoe hanaiky hadalainy ianao.—Matio 10:16; Kolosianina 4:6.
Manaova akanjo maotina. Mety hisy hanadala ianao raha manao akanjo tsy maotina. Ampirisihin’ny Baiboly isika mba hiakanjo “amin’ny fomba maotina sy amim-pahendrena.”—1 Timoty 2:9.
Fidio tsara ny namanao. Mety hadalain’ny olona ianao, raha olona manaiky adaladalaina no ataonao namana.—Ohabolana 13:20.
Aza mihaino resaka maloto. Mialà rehefa mivadika ho “resaka adaladala na vazivazy vetaveta” ny resaka.—Efesianina 5:4.
Halaviro ny fakam-panahy. Mba mailomailo rehefa misy manasa anao hijanona any am-piasana aorian’ny firavana, nefa tsy misy antony marim-pototra.—Ohabolana 22:3.
Aoka ianao ho hentitra sy tsy hiolakolaka. Raha misy manadala anao dia tsory aminy hoe tsy tianao ny ataony. (1 Korintianina 14:9) Afaka miteny, ohatra, ianao hoe: “Aza mikasikasika ahy ianao fa tsy tiako izany.” Afaka manoratra taratasy aminy ianao. Lazao ao hoe inona ilay zavatra nataony sy ny fihetseham-ponao vokatr’ilay izy ary izay tianao hataony. Resaho aminy mazava tsara fa ny fivavahanao sy ny fitsipika arahinao no mahatonga anao tsy hanaiky hadalainy.—1 Tesalonianina 4:3-5.
Mitadiava fanampiana. Raha mbola manadala anao ihany ilay olona, dia miresaha amin’ny namana azo itokisana, na mpianakavinao, na mpiara-miasa aminao, na olona efa zatra manampy an’ireo iharan’izany. (Ohabolana 27:9) Maro koa no nahazo fanampiana rehefa nivavaka. Na mbola tsy nivavaka mihitsy aza ianao taloha dia mivavaha fa afaka manampy anao i Jehovah, ilay “Andriamanitry ny fampiononana rehetra.”—2 Korintianina 1:3.
Olona an-tapitrisany no mijaly satria misy manadala any am-piasana. Afaka manampy anefa ny Baiboly.
Ny Olana Atrehin’ny Vehivavy